एमाले महाधिवेशन : के भन्छन् अरू दलका नेता ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन : के भन्छन् अरू दलका नेता ?
काठमाडौँ — देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारबाट चितवनमा सुरु हुँदै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदम, पाँचदलीय गठबन्धन सरकार र आगामी चुनावलाई लिएर देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दल एमाले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ ।
विभाजन भोगेको केही महिनापछि पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वको खोजी गरिरहेको एमालेको महाधिवेशनबाट अन्य राजनीतिक दलका अपेक्षा र विश्वास के छन् त ?
'आफ्ना कमजोरीलाई गम्भीर आत्मसात् गरोस्'
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता - नेपाली कांग्रेस
राजनीतिक दलको अधिवेशनमा एउटा दलले अर्को दलप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्ने नै हो । सामान्यतया हामी राजनीतिक दल आफूले गरेका राम्रा कुरा मजाले देख्छौं । आफ्ना कमजोरीलाई गम्भीर आत्मसात् गर्ने, आत्मचिन्तन गर्ने र त्यसलाई परिमार्जन कम गर्छौं भन्ने आम बुझाइ छ । यो बेलामा कांग्रेस र एमालेतिर लक्षित प्रश्न एउटै छ । त्यो प्रश्नमा एमालेले ध्यान दियोस् । दलहरू देशको राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छन् तर आफैंलाई किन रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर नागरिक पंक्तिमा उठेको प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
बितेको तीन वर्षमा स्थिरता र समृद्धिका लागि दिइएको वाचा जुन नेतृत्वको दम्भ र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भंग भयो, त्यसको गम्भीर आत्मचिन्तन, आत्मसमीक्षा गर्न सक्यो भने यो अधिवेशन सफल भएको मान्नुपर्छ । अन्यथा नेतृत्वमा हिजो उहाँ छँदै हुनुहुन्थ्यो अब पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यसले तात्विक रूपमा केही फरक पार्दैन ।
'नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विभाजनको कदमप्रति आत्मालोचना गर्छ कि गर्दैन ?'
नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी केन्द्र
केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासमा प्राप्त अभूतपूर्व अवसर थियो । तर, यसबीच गरेको प्रतिगामी कदम, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विभाजनको कदमप्रति आत्मालोचना गर्छ कि गर्दैन ?
प्रतिगमनको सन्दर्भमा पनि आत्मालोचना नगर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेको कदमको पनि आत्मालोचना नगर्ने, कम्युनिस्ट सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुमाउन भूमिका खेलेको विषयमा पनि आत्मालोचना नगर्ने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
वैचारिक, राजनीतिक प्रश्न, नीति र कार्यक्रमहरूमा छलफल गरेर सही दिशातर्फ जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक लक्ष्यका बारेमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन । त्यस कोणबाट पनि यसको सकारात्मक भूमिका देखिराखेका छैनौं । तैपनि समग्रमा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नै त्यसबारे केही भन्न सकिन्छ ।
'शोषित पीडित जनताका लागि काम गर्न सकोस्'
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा
संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्या सुल्झाउन महाधिवेशनले बल पुगोस् । नेपालका शोषित पीडित जनताका लागि काम गर्न सकोस् । उहाँहरूलाई महाधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना छ ।
'एमालेसँग हाम्रो कुनै अपेक्षा छैन'
जगन्नाथ खतिवडा, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एस
हामीलाई निम्ता त गर्नुभएको छैन, त्यसलाई सजिलो गरी स्वीकार गर्छौं । तर, एमालेसँग हाम्रो कुनै अपेक्षा छैन । उसले कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आफूलाई चिनाइरहेको छ, त्योचाहिँ होइन । कम्युनिस्टका नाममा रहेको चरम दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी शक्ति हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । मूलभूत रूपमा सक्कली कम्युनिस्ट चिन्तनधाराको उसले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
उसले आफूभित्र कुनै पुनर्जागरणको कुरा ल्यायो भने मात्रै ऊ कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ । एमालेका कार्यकर्ता पंक्ति जुधेर ओली प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने दिशामा लागे भने त्यसले थोरै केही प्रगति गर्ला । तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना देखिँदैन । एमाले सर्वसत्तावाद र राष्ट्रिय अहंकारको गम्भीर सिकार बनेको छ, त्यसबाट मुक्त होस् ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १०:१०
बुस्टर डोजमा कुन खोप ?
कोभिडविरूद्ध खोप लगाएको ६ महिनापछि संक्रमणविरूद्ध लड्ने एन्टिबडी कम हुँदै जाने भएकाले जोखिम कम गर्न बुस्टर डोज आवश्यक
मंसिर १०, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिडविरुद्ध खोप लगाएको ६ महिनापछि शरीरमा संक्रमणविरुद्ध लड्ने एन्टिबडी क्रमशः कम हुँदै जान्छ । जसले गर्दा पुनः संक्रमित हुने जोखिम बढ्छ । उक्त जोखिमलाई कम गर्न ६ महिनापछि ‘बुस्टर डोज’ लगाउनुपर्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । हाल विश्वका ३६ भन्दा बढी मुलुकमा कोभिडविरुद्ध पूर्ण खोप पाएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिन थालिएको छ ।
अमेरिकामा त एक करोडभन्दा बढीले बुस्टर डोज लगाइसकेका छन् । अमेरिका फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले त्यहाँ उपलब्ध सबै कोभिडविरुद्धको खोपलाई ‘मिक्स एन्ड म्याच’ रणनीतिअन्तर्गत उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘यूएस एफडीएको मञ्जुरीपछि अमेरिकी नागरिकले पहिले लगाएका कोभिड खोपबाहेक अर्को खोपलाई समेत बुस्टर डोजका रूपमा चुन्न पाउँछन्,’ नेसनल इम्युनाइजेसन एडभाइजरी कमिटीका सदस्य एवं इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर भन्छन्, ‘अमेरिकी रणनीति हामी पनि अँगाल्न सक्छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि मान्यता दिएको खण्डमा ‘मिक्स एन्ड म्याच’ रणनीति लागू गर्न सकिन्छ ।’
बुस्टर डोज लगाउन चाहने व्यक्तिले उपलब्ध खोपको फाइदा र जोखिमबारे विचार गर्नुका साथै आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुन उत्पादन उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गर्न सक्ने अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले जनाएको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेकी स्वास्थ्य पत्रकार भगवती तिमिल्सिनाले नेपालमा ६ महिनापछि दोस्रो डोजको कोभिसिल्ड खोप लिए पनि बुस्टर डोजका रूपमा ‘मोडर्ना’ लिएकी थिइन् । ‘स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले मलाई फाइजर वा मोडर्ना लिनु राम्रो हुने सल्लाह दिएका थिए,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (यूएसएफडीए) ले ६५ वर्ष माथिका, कुनै रोगका कारण कोभिडको उच्च जोखिममा रहेका १८ वर्षमाथिका र जागिरका कारण कोभिडको सम्पर्कमा आउने सबैभन्दा बढी खतरामा रहेका १८ वर्षमाथिका युवालाई समेटेर एउटा अध्ययन गरेको थियो । अमेरिकाको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका तर्फबाट ४ सय ६५ जनामा गरिएको उक्त अध्ययनले फरक–फरक प्रकारका ‘मिक्स एन्ड म्याच’ गरिएको बुस्टर डोज वयस्कका लागि पूर्ण सुरक्षित रहेको देखाएको छ ।
नेपालले पनि विकसित मुलुकले जस्तै डब्लूएचओबाट अनुमतिप्राप्त बुस्टर डोजका सम्बन्धमा चाँडो निर्णय लिन विज्ञहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि तत्काल छलफल थाल्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तत्काल प्राथमिकताका आधारमा दीर्घरोगी र फ्रन्टलाइनरलगायतलाई खोप उपलब्धताका आधारमा बुस्टर डोज दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । छातीरोग विशेषज्ञ डा. नवीन प्रकाश शाहले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले शरीरमा कोभिडविरुद्धको एन्टिबडी कायम राख्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । त्यसैले पनि बुस्टर डोजलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकातर्फ हामी कोभिड संक्रमण नहोस् भनेर सबै व्यक्तिलाई खोप लगाउँदै छौं, अर्कोतर्फ खोप पाइसकेकाहरूको शरीरमा उत्पन्न कोभिडविरुद्धको एन्टिबडी कायम राख्न सकेनौं भने ठूलो दुर्घटनाको जोखिम कायमै रहन्छ,’ डा. शाहले भने ।
खोप अभियान सुरु भएदेखि बिहीबारसम्म १ करोड ७५ लाख २१ हजार ५ सय २३ डोज खोप लगाइएको छ । कुल जनसंख्याको ३०.८ प्रतिशत अर्थात् ९३ लाख ६७ हजार ७ सय ७८ ले एक डोज र २६.८ प्रतिशत अर्थात् ८१ लाख ५३ हजार ७ सय ३४ जनाले पूर्ण खोप लगाएका छन् । पूर्ण खोप लगाएको ६ महिना पुगिसकेकाले एक वर्ष नाघ्नुअघि नै तेस्रो वा बुस्टर डोज लगाइसक्नुपर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसी बताउँछन् । बुस्टर डोजका रूपमा ‘एम–आरएनए’ खोप लगाउन उनले सुझाए । फाइजर र मोडर्ना ‘एम–आरएनए’ प्रविधिबाट बनेको खोप हो भने अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन, स्पुतनिक भाइरल भेक्टर प्रविधिमा आधारित खोप हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १०:०३